ကောင်းတာလုပ်တိုင်း ကောင်းကျိုးမခံစားရတာတွေဟာ ဘာကြောင့်လဲ ? – Trend.com.mm
တခါက အရက်သမားတစ်ယောက်ရှိတယ်။ အရက်သမားဆိုတဲ့အတိုင်း သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေဟာ အရက်ပါပဲ ၊ အရက်သမားဆိုပေမယ့် သူ့မှာအတတ်ပညာတစ်ခုရှိတယ်။ သူဟာခဲတစ်လုံးကို ကောင်းကင်ပေါ်မှာ ပျောက်ကွယ်သွားတဲ့အထိ အမြင့်ဆုံးရောက်အောင်ပစ်နိုင်သတဲ့။
တစ်နေ့မှာတော့ အရက်မူးမူးနဲ့ ကောင်းကင်ထက်ကိုခဲတစ်လုံး ပစ်တင်လိုက်ပြီး လမ်းလျှောက်လာရင်းက ဆွမ်းခံကြွလာတဲ့ ရဟန်းတော်တပါးနဲ့တွေ့တော့ အရက်သမား ကစဉ်းစားတယ် “ သူများတွေမှာတော့ သာသနာဘောင်ဝင်ပြီးရဟန်းပြုလို့..၊ ငါ့မှာတော့ အကုသိုလ်တွေများလိုက်တာ ..ဒီအတိုင်းနေလို့ကတော့ မဖြစ်သေးပါဘူး ကုသိုလ်ရအောင်လုပ်အုံးမှပဲ “ဆိုပြီး ရဟန်းကို သုံးကြိမ်ဦးချ ကန်တော့လိုက်တယ်။
အဲဒီအချိန်မှာ သူစောစောက ပစ်တင်လိုက်တဲ့ ခဲဟာသူ့ခေါင်းပေါ်ကို တည့်တည့်ကျလာတော့တယ်။ အရက်သမားက အရမ်းစိတ်ဆိုးသွားပြီး –
“ ကြည့်စမ်းပါဦး! ဒီလောကကြီးကရိုင်းလိုက်တာ ပြောင်းပြန်ကြီးပါလား.. မူးရစ်ယမ်းကားပြီး အကုသိုလ်တွေ လုပ်နေတုန်းကတော့ ငါ့ကို ဘယ်သူမှ မစော်ကားရဲဘူး၊ ဒီင်္လောက်နာကျင်တဲ့ ဝေဒနာလည်းမခံစားရဖူးဘူး၊ အခု ကု သိုလ်ကောင်းမှုလည်းလုပ်ရော နာလိုက်တာ ထိပ်ပါပေါက်သွားတယ်။ ဒီလောကကြီးက ပြောင်းပြန်ကြီး၊ အကုသိုလ်လုပ်ရင် ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်။ ကုသိုလ်လုပ်တော့ အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်” ဆိုပြီးကြွေးကြော်တယ်။
“ ခဲလုံးဟာ အလွန်မြင့်တဲ့ အရပ်ကကျလာတာတွေရတယ် ဒကာ..။ ဒီနားတစ်ဝိုက်မှာ ခဲလုံးကို တော်တော်အမြင့်ရောက်အောင် ဘယ်သူပစ်နိုင်သလဲ” လို့မေးလိုက်တဲ့ အခါကျတော့ အရက်သမား က “ ဒီနားတစ်ဝိုက်မှာတော့ ခဲလုံးကိုမြင့်မြင့်ပစ်နိုင်တာဆိုလို့ တပည်တော်တစ်ယောက်တည်းပဲရှိပါတယ် ဘုရား ” လို့ပြန်လျှေက်လိုက်တယ်။
ရဟန်းက “ ဒါဆိုရင် ကျလာတဲ့ခဲလုံးဟာ ဘယ်သူ့ခဲလုံးလဲ” လို့ဆက်မေးတယ်။
အရက်သမားက “ တပည့်တော်ပစ်တင်လိုက်တဲ့ခဲလုံးပါ ”လို့ဝန်ခံတယ်။
ဒီအခါ ရဟန်းကဆက်ပြီး “ အဲဒါပါပဲ ဒကာ၊ အရင်ကပြုခဲ့ဖူးတဲ့ အကုသိုလ်ကံဟာ အခုအကျိုးပေးလိုက်တာပါပဲ..။ အခုပြုနေတဲ့ ကုသိုလ်ကံက အကုသိုလ်အကျိုးပေးတာမဟုတ်ဘူး..။
“ ဒါပေမဲ့ အကုသိုလ်ဟာ အကုသိုလ်ပြုနေတဲ့အချိန်မှာ အကျိုးမပေးဘဲ ကုသိုလ်ပြုတဲ့အချိန်ကျမှ လာအကျိုးပေးတာကတော့ ဒကာအတွက် ကံဆိုးရုံတင်မကဘူး ဥာဏ်ပါဆိုးသွားစေတယ်။ အဲဒါ ကုသိုလ်ပြုလို့ အကုသိုလ်အကျိုးပေးတာမဟုတ်ဘူး။ အရင်က အကုသိုလ်ပြုခဲ့လို့ အခုအကုသိုလ်အကျိုးပဲ လာပေးတာ။ လတ်တလောဖြစ်စဉ်တစ်ခုကို သေသေချာချာ မစဉ်းစား မတွေးခေါ်တတ်ရင်တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှု လုပ်ပါရက်နဲ့ မကောင်းတဲ့ရလာဘ်တွေ အကုသိုလ်တွေ ဖြစ်တယ်လို့ အထင်လွဲမှားစရာရှိတယ်..။ လောကကြီးဟာ ပြောင်းပြန်မဟုတ်ဘူး အတည့်အတိုင်းပါပဲ။ လူတွေရဲ့အတွေးအမြင် တွေကသာ ဖောက်ပြန်နေကြတာ’’ လို့ပြောဆို ဆုံးမပြီး ပြန်ကြွသွားပါတယ်။
ဒီပုံပြင်လေးကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် လူ့အသိုင်းဝိုင်းမှာ ကောင်းတာလုပ်ပြီး ကောင်းကျိုးမရတဲ့အပြင် ဒုက္ခတွေခံစားနေရတာဟာ အရင်ကလုပ်ခဲ့တဲ့ အကုသိုလ်ကံတွေကြောင့် အကျိုးခံစားနေရပြီး လက်ရှိလုပ်နေတဲ့ ကောင်းမှုကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကို လောလောလတ်လတ်မခံစာရသေးတာပါ။
သက်ရှိသတ္တ၀ါမှန်သမျှ ကံနဲ့မကင်းကြပါဘူး။ ကံနဲ့မကင်းသလို ပစ္စပ္ပန်၊ အတိတ် ၊ အနာဂတ်ဆိုတဲ့ အချိန်ကာသုံးရပ်နဲ့လည်း မကင်းနိုင်ကြဘူး။ တစ်ဦးတစ်ယောက်ပြုလုပ်တဲ့ ကံတွေမှာပဲ ကောင်းတာ ၊ ဆိုးတာ နှစ်မျိုးစလုံးဒွန့်တွဲပြီးပါဝင်နေတော့ ကံတွေအကျိုးပေးပုံကိုဖော်ပြဖို့မလွယ်ကူပါဘူး။ တစ်ချို့ ကံအကျိုးပေးပုံတွေဟာ တစ်ဘဝ၊ နှစ်ဘဝခြားပြီးမှ အကျိုးလာပေးတာတွေလည်းရှိပါတယ်။ ဆရာကြီး ဦးညွန့်မောင်ရေးတဲ့ “ကံနှင့် သတ္တလောက” အမရပူရ မဟာဂန္ဓာရုံဆရာတော် အရှင်ဇနကာဘိဝံသ ရေးတဲ့ အခြေပြုပဌာန်း စာအုပ်နဲ့ အခြေပြုပဌာန်း တရားများကို နာကြားဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
“ တခါက အရကျသမားတဈယောကျရှိတယျ။ အရကျသမားဆိုတဲ့အတိုငျး သူ့ရဲ့မိတျဆှဟော အရကျပါပဲ ၊ အရကျသမားဆိုပမေယျ့ သူ့မှာအတတျပညာတဈခုရှိတယျ။ သူဟာခဲတဈလုံးကို ကောငျးကငျပျေါမှာ ပြောကျကှယျသှားတဲ့အထိ အမွငျ့ဆုံးရောကျအောငျပဈနိုငျသတဲ့။
တဈနမှေ့ာတော့ အရကျမူးမူးနဲ့ ကောငျးကငျထကျကိုခဲတဈလုံး ပဈတငျလိုကျပွီး လမျးလြှောကျလာရငျးက ဆှမျးခံကွှလာတဲ့ ရဟနျးတျောတပါးနဲ့တှတေ့ော့ အရကျသမား ကစဉျးစားတယျ “ သူမြားတှမှောတော့ သာသနာဘောငျဝငျပွီးရဟနျးပွုလို့..၊ ငါ့မှာတော့ အကုသိုလျတှမြေားလိုကျတာ ..ဒီအတိုငျးနလေို့ကတော့ မဖွဈသေးပါဘူး ကုသိုလျရအောငျလုပျအုံးမှပဲ ဆိုပွီး ရဟနျးကို သုံးကွိမျဦးခြ ကနျတော့လိုကျတယျ။
အဲဒီအခြိနျမှာ သူစောစောက ပဈတငျလိုကျတဲ့ ခဲဟာသူ့ခေါငျးပျေါကို တညျ့တညျ့ကလြာတော့တယျ။ အရကျသမားက အရမျးစိတျဆိုးသှားပွီး –
“ ကွညျ့စမျးပါဦး! ဒီလောကကွီးကရိုငျးလိုကျတာ ပွောငျးပွနျကွီးပါလား.. မူးရဈယမျးကားပွီး အကုသိုလျတှေ လုပျနတေုနျးကတော့ ငါ့ကို ဘယျသူမှ မစျောကားရဲဘူး၊ ဒီင်ျလောကျနာကငျြတဲ့ ဝဒေနာလညျးမခံစားရဖူးဘူး၊ အခု ကု သိုလျကောငျးမှုလညျးလုပျရော နာလိုကျတာ ထိပျပါပေါကျသှားတယျ။ ဒီလောကကွီးက ပွောငျးပွနျကွီး၊ အကုသိုလျလုပျရငျ ကုသိုလျဖွဈတယျ။ ကုသိုလျလုပျတော့ အကုသိုလျဖွဈတယျ” ဆိုပွီးကွှေးကွျောတယျ။
အဲဒီအခါ ရဟနျးတျောကလဲ ခဏစဉျးစားပွီး အခုလိုပွောလိုကျတယျ။
“ ခဲလုံးဟာ အလှနျမွငျ့တဲ့ အရပျကကလြာတာတှရေတယျ ဒကာ..။ ဒီနားတဈဝိုကျမှာ ခဲလုံးကို တျောတျောအမွငျ့ရောကျအောငျ ဘယျသူပဈနိုငျသလဲ” လို့မေးလိုကျတဲ့ အခါကတြော့ အရကျသမား က “ ဒီနားတဈဝိုကျမှာတော့ ခဲလုံးကိုမွငျ့မွငျ့ပဈနိုငျတာဆိုလို့ တပညျတျောတဈယောကျတညျးပဲရှိပါတယျ ဘုရား ” လို့ပွနျလြှကျေလိုကျတယျ။
ရဟနျးက “ ဒါဆိုရငျ ကလြာတဲ့ခဲလုံးဟာ ဘယျသူ့ခဲလုံးလဲ” လို့ဆကျမေးတယျ။
အရကျသမားက “ တပညျ့တျောပဈတငျလိုကျတဲ့ခဲလုံးပါ ”လို့ဝနျခံတယျ။
ဒီအခါ ရဟနျးကဆကျပွီး “ အေး..အဲဒါပါပဲ ဒကာ၊ အရငျကပွုခဲ့ဖူးတဲ့ အကုသိုလျကံဟာ အခုအကြိုးပေးလိုကျတာပါပဲ..။ အခုပွုနတေဲ့ ကုသိုလျကံက အကုသိုလျအကြိုးပေးတာမဟုတျဘူး..။
“ ဒါပမေဲ့ အကုသိုလျဟာ အကုသိုလျပွုနတေဲ့အခြိနျမှာ အကြိုးမပေးဘဲ ကုသိုလျပွုတဲ့အခြိနျကမြှ လာအကြိုးပေးတာကတော့ ဒကာအတှကျ ကံဆိုးရုံတငျမကဘူး ဉာဏျပါဆိုးသှားစတေယျ။ အဲဒါ ကုသိုလျပွုလို့ အကုသိုလျအကြိုးပေးတာမဟုတျဘူး။ အရငျက အကုသိုလျပွုခဲ့လို့ အခုအကုသိုလျအကြိုးပဲ လာပေးတာ။ လတျတလောဖွဈစဉျတဈခုကို သသေခြောခြာ မစဉျးစား မတှေးချေါတတျရငျတော့ကုသိုလျကောငျးမှု လုပျပါရကျနဲ့ မကောငျးတဲ့ရလာဘျတှေ အကုသိုလျတှေ ဖွဈတယျလို့ အထငျလှဲမှားစရာရှိတယျ..။ လောကကွီးဟာ ပွောငျးပွနျမဟုတျဘူး အတညျ့အတိုငျးပါပဲ။ လူတှရေဲ့အတှေးအမွငျ တှကေသာ ဖောကျပွနျနကွေတာ’’ လို့ပွောဆို ဆုံးမပွီး ပွနျကွှသှားပါတယျ။
ဒီပုံပွငျလေးကိုကွညျ့ခွငျးအားဖွငျ့ လူ့အသိုငျးဝိုငျးမှာ ကောငျးတာလုပျပွီး ကောငျးကြိုးမရတဲ့အပွငျ ဒုက်ခတှခေံစားနရေတာဟာ အရငျကလုပျခဲ့တဲ့ အကုသိုလျကံတှကွေောငျ့ အကြိုးခံစားနရေပွီး လကျရှိလုပျနတေဲ့ ကောငျးမှုကုသိုလျရဲ့အကြိုးကို လောလောလတျလတျမခံစာရသေးတာပါ။
သကျရှိသတ်တဝါမှနျသမြှ ကံနဲ့မကငျးကွပါဘူး။ ကံနဲ့မကငျးသလို ပစ်စပ်ပနျ၊ အတိတျ ၊ အနာဂတျဆိုတဲ့ အခြိနျကာသုံးရပျနဲ့လညျး မကငျးနိုငျကွဘူး။ တဈဦးတဈယောကျပွုလုပျတဲ့ ကံတှမှောပဲ ကောငျးတာ ၊ ဆိုးတာ နှဈမြိုးစလုံးဒှနျ့တှဲပွီးပါဝငျနတေော့ ကံတှအေကြိုးပေးပုံကိုဖျောပွဖို့မလှယျကူပါဘူး။ တဈခြို့ ကံအကြိုးပေးပုံတှဟော တဈဘဝ၊ နှဈဘဝခွားပွီးမှ အကြိုးလာပေးတာတှလေညျးရှိပါတယျ။ ဆရာကွီး ဦးညှနျ့မောငျရေးတဲ့ “ကံနှငျ့ သတ်တလောက” အမရပူရ မဟာဂန်ဓာရုံဆရာတျော အရှငျဇနကာဘိဝံသ ရေးတဲ့ အခွပွေုပဌာနျး စာအုပျနဲ့ အခွပွေုပဌာနျး တရားမြားကို နာကွားဖို့ တိုကျတှနျးလိုကျပါတယျ။